Wararka | April 2020
Nidaamka ayaa lagu magacaabay ciyaaraha ugu caansan qeybta hore ee 2018
Editor Ee Doorashada April 6,2020
Gamer wuxuu sii daayay qaybtii uu ka ahaa Fallout 76 kahor Bethesda
Ka hor intaan la sii daayo Doomaha 76, weli waxaa ku dhawaad ​​shan bilood, laakiin qof waliba wuxuu diyaarin karaa culeyska iyo walwalka ee habka cayaarta cayaarta cayaarta. Isbeddelka loogu talagalay Fallout 4, oo ay soo saartay user ka yar naanaysta magaca SKK50, waxaa loogu talagalay inuu dib u furo sifooyinka muhiimka ah ee mashruuca cusub ee Bethesda on engineka hore.
Waa maxay daboolka nolosha ee VKontakte, iyo sida loo daro
Shabakadda bulshada "VKontakte" bil kasta waxa ay ku raaxeeysataa isticmaalayaasheeda iyaga oo leh casriyado iyo jajabyo ah in tartamayaashu aysan haysan. Bishaan Diisambar ma jirin wax laga reebay. Waxaa laga yaabaa, waxa ugu xiisaha badan, dhamaadka sannadka, waa mid ka mid ah khayraadka ugu weyn ee Runet - oo daboolaya kooxaha VKontakte. Mawduuca Waa maxay daboolid daboolan leh ee isticmaalka daboolka nool Sida loo sameeyo dabool nololeed oo ku saabsan VKontakte: Tallaabo tallaabo tallaabo ah Waa maxay daboolka daboolida Live cover waa mid ka badan kan kaliya ee loogu talagalay bulsho caan ah.
Gigabyte Aorus AD27QD - kormeerka ugu horreeya ee xeeladda aduunka
Gigabyte wuxuu isku diyaarinayaa inuu sii daayo qalab 27-inch oo tiknoolaji ah Aorus AD27QD. Niyadjab, sida soo-saaraha ayaa sheegay, inay awood u yeelan doonto inay ciyaartoy u siiyaan ciyaartoy ka faa'iideysta ciyaaraha internetka. Gigabyte Aorus AD27QD waxay ku saleysan tahay IPS-panel oo leh qiyaaso ah 2560x1440 pixels iyo xadka ugu sareeya ee 144 Hz.
Lagu soo bandhigay cabsida Maid ee Sker
Ciyaarta waxay ka dhacdaa toban kiiloomitir oo ka socota xafiiska horumarinta Wales ee Interactive. Magaca cabsida waxaa loola jeedaa balladhka Welsh ee magaciisa la mid ah iyo buugga Richard Blackmore ee gabadha ka timid Scher, oo lagu daabacay 1872. Si kastaba ha ahaatee, shaqooyinkaas, ciyaarta waxaa laga yaabaa inay la xiriirto magaca goobta shaqada - Sker House (Sker House), oo ku yaalla koonfurta Wales.
Mar labaad nasiib xun: Shaxda la sii daayay ee Agony ayaa la joojiyay mar labaad.
Argton Argagixisada halista ah, oo ay soo saareen Studio studio Madmind Studio, ayaa lagu sii daayay foormarro canshuro ah, oo aan ka jirin qaar ka mid ah taraafikada, dhawaaqyada iyo madadaalada. Horumariyayaashu waxay markii hore qorsheynayeen in ay ku soo celiyaan nuxurka ciyaartii ay ku dhamaatay ciyaartoyda, ka dibna qeybtii ciyaarta ee ciyaarta, laakiin labadoodaba qorshahan ayaa u muuqday mid guuldareystay.
Adeegga qaybinta digital-ka ah ee cayaaraha Steam wuxuu daabacay qiimeynta caan ah ee mashaariicda cayaarta qeybtii hore ee 2018. Intaa ka dib, maamulka sare ee dhismaha ayaa ka mid ah liisaska kala duwan ee alaabooyinka cusub, mashruucyada VR iyo ciyaaraha cayaaraha intooda badan si siman.
Farshaxanada elektarooniga ah ayaa ku dhawaaqay sameynta barxadda ciyaarta kubbadda
Tiknoolajiyada EA waxaa lagu magacaabaa Project Atlas. War saxaafadeedka ku xusan bogga rasmiga ah ee Farshaxanka elektaroonigga ah wuxuu sameeyay agaasimaha farsamada shirkadda Ken Moss. Mashruuca Atlas waa nidaam daruuri ah oo loogu talagalay labada ciyaaryahan iyo kuwa horumariya. Laga soo bilaabo marka la eego aragtida gamer, waxaa laga yaabaa inuusan jirin wax khaas ah oo gaar ah: isticmaalaha wuxuu soo rogaa codsiga macmiilka wuxuuna bilaabaa ciyaarta, taas oo lagu baaraandegayo serverka EA.
Abuuraha Imertale ayaa sii daayay sheeko qarsoodi ah oo uu ciyaaray
Soo jiidashada cayaaraha si ay uga qayb qaataan sahanka. Maalinta kale ee xisaabta Twitter-ka ee Undertale, ayaa sii daaysay saddex sano ka hor by horumariye indie Toby Fox, link ayaa u muuqday on deltarune.com, halkaas oo martida lagu martiqaaday inay soo dejiyaan rakibeyaal gaar ah oo leh cinwaanka SURVEY_PROGRAM ("Barnaamijka Poll").
Horumarinta waxay ka baxaan farshaxanka elektaroonigga sababtoo ah Star Wars
Kiis dacwad lagu soo oogay bilawga bilawga ah ee Star Wars Battlefront II. Istuudiyaha Iswiidhen ee DICE, oo ay leedahay Farshaxanka elektaroonigga ah, ayaa 10% ka lumay shaqaalihiisii ​​sanadkii tagay, ama 40 qof 400 oo ka mid ah 400. Hase yeeshe, sida laga soo xigtay qaar ka mid ah warbixinnada, tiradaasi waxay ka yar tahay tirada dhabta ah. Labo sababood oo ah bixiyeyaasha ka soo jeeda DICE waxaa loogu yeeraa.
Kaydinta dayactirka qalabka gadashada ayaa ku kici doona Apple $ 7 milyan oo doolar
Maxkamad Australiya ayaa ku soo rogtay ganaax dhan 9 milyan oo doolarka Australia, oo u dhiganta 6.8 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Inta badan shirkadu waxay bixin doontaa lacag-bixinta dayac-tirka casriga ah ee bilaashka ah, taasoo ku xiran "khaladaadka 53", ayaa soo tebiya Warbixinta Maaliyadeed ee Australia. Nidaamka "error 53" ayaa dhacay ka dib markii la rakibay iPhone 6 oo ka mid ah version 9aad ee macruufka ah waxayna keeneen qalab aan la jarin oo qalab ah.
Horumarinta FIFA ayaa hagaajinaysa qalad xun
EA ayaa sii deysay barkad loogu talagalay FIFA 19, taas oo wax ka badaleysa si toos ah ciyaaraha gamclay, laakiin sidoo kale waxay saxday qalad ismaamul ah kaas oo noqday meme. Goolhayaha 36 jirka ah Petr Cech, oo haatan u ciyaara Arsenal ee London, ayaa la ogyahay kaliya xirfadiisa kubada cagta, laakiin sidoo kale muuqaalkiisa: Ka dib dhaawac weyn oo soo gaaray 2006dii, Cech wuxuu mar walba ku qaataa koofiyada difaaca.
Shirkadda 12-core core AMD Ryzen waxay ku dhalatay Isticmaalka UserBenchmark
Xaqiiqda ah in hawlgalada Ryzen 3000 ee taxanaha ah ay heli doonaan wax ka badan siddeed xarumood, madaxa AMD Lisa Soo ayaa sheegay laba todobaad ka hor, laakiin tirada saxda ah ee unugyada xisaabinta ee bustayaasha cusub ayaa weli aan la aqoon dhammaan waqtigan. Xogta dhowaan laga helay goobta benchmarking Userbenchmark ayaa si cad u caddaynaya xaaladda: ugu yaraan hal nooc oo 12-hormood ah ayaa joogi doona qarniga seddexaad ee Ryzen CPU.
Firaxis waxay sii wadaysaa in ay la wadaagto faahfaahinta qaabka cusub ee loogu talagalay Civilization VI
Ku darsiga dheeraadka ah ee duufaan ururinta ee ku saleysan Civilization 6 wuxuu noqon doonaa wadan cusub. Boqortooyada Ottoman, oo ay hogaaminaysay Suleiman aan caqli gal ahayn, ayaa lagu soo rogay falal milatari oo xoog leh. Unug gaar ah oo ka mid ah qurba-joogtu waxay noqon doontaa, sida qaybta ugu dambeysa ee ciyaarta, Janisarada. Waxay ka muuqan doonaan Ottomans halkii ay ka heli lahaayeen musikadaha caadiga ah. Unugyadaasi waxay kor u qaadeen xoog iyo qiimo hoose marka la barbar dhigo cutubyada isku midka ah ee wakhtigooda.
Twitter wuxuu mamnuucay xisaabaadka 70 milyan
Adeegga microblogging Twitter ayaa bilaabay dagaal weyn oo ka dhan ah spam, taraafikada iyo been abuurka wararka. Laba bilood gudahood, shirkaddu waxay xirtay qiyaastii 70 milyan xisaabaad oo la xidhiidha dhaqdhaqaaq xumo, ayuu qoray wargayska Washington Post. Twitter wuxuu bilaabay inuu si firfircoon u tirtiro xisaabaadka spam tan iyo bishii Oktoobar 2017, laakiin bishii May 2018 xoogaa xaddidan ayaa si aad ah u kordhay.
Rabshad aad u qabatimay oo ka soo jeeda 90s waxay eegaysaa muraayadaha waaweyn
Nidaamka shaashadda mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan ee la aqoonsan karo dhamaadka qarnigii ugu dambeeyay, Duke Nukem, ayaa loo diyaarinayaa horumarinta. Qorayaashu waxay ballan-qaadeen dagaalyaal xiiso leh oo leh madadaalo madow iyo ficil firfircoon ee qaabka "Deadpool". Mashruucu wuxuu wali ku jiraa marxaladda hore ee qorshaynta, laakiin horey u baxday xaqiiqooyin la xaqiijiyay iyo xanta.
Facebook waxay si qarsoodi ah u bixisaa dadka isticmaala xogta shakhsiga ah
Sanadka 2016-ka, shabakada bulshada ee Facebook ayaa soo saartay arjiga cilmi-baarista Facebook, kaas oo kormeeraya tallaabooyinka macaamiisha casriga ah isla markaana ururiya xogahooda shakhsiyeed. Isticmaalkeeda, shirkaddu waxay si qarsoodi ah u bixisaa dadka isticmaala $ 20 bishii, oo ay sameeyeen saxafiyiin ka soo daabacay TechCrunch. Intii lagu guday baaritaanka, Facebook Research waa qaab la bedelay macmiilka Onavo Protect VPN.
Xayeysiiska WhatsApp ayaa soo bixi doona
Rasmiga WhatsApp ee caanka ah ayaa ilaa hadda la waayay taageeradii loogu talagalay stickers, laakiin tani waxay dhici karta in dhawaan la beddelo. Sida laga soo xigtay daabacaadda online ee WabetaInfo, horumarinta adeegyada ayaa hore u tijaabiyay muuqaal cusub oo ku jira noocyada beta ee barnaamijyada Android. Markii ugu horeysay ee wax lagu dhejiyo waxay u muuqatay in imtixaanka WhatsApp 2.
Studio Bethesda ayaa ka wada hadlay qorshaha horumarinta Doomaha 76
Horumarinta Beytesda waxay soo bandhigtay qorshe horumarineed oo loogu talagalay Fallout 76-ganaax-MMO. Ciyaartoyda waxaa sugaya seddex dhacdo oo caalami ah, mid kasta oo ka mid ah wakhti cayiman oo sannadka ah. Guga waxaa jiri doona "Update Appalachia Wild". Munaasabada ugu horreysa waxaa la dareemi doonaa 12-ka Maarso, cayaaraha waxaa loo soo bandhigi doonaa in la dhiso biirka oo mamnuucaya "koofiyadaha moonshine" ciyaarta.
Intee in le'eg iyo meeqa ayuu u shaqeeyaa YouTube?
Sidee yutubery ku guuleysta halyeeyada maanta. Qaar ka mid ah qorayaasha jaangooyadooda gaarka ah ee adeegga joornaalka ee caanka ah ayaa si dhab ah u gudan jiray waxa ay u muuqdaan kuwo aan macquul ahayn - inay noqdaan madadaalo iyo is-hoosaysiin ilaha dhaqaalaha dhabta ah, si loo abuuro wax soo saar tayo sare leh oo ka soo baxaya xoqan, islamarkaana ay noqdaan kuwo caan ku ah caalamka.
Baabbuun baa diyaariyay iibinta xagaaga
Qaybinta adeegga digital-ka ah ee loo yaqaan 'Steam' wuxuu ku dhawaaqay bilawga iibka xagaaga. Ilaa 5-da Luulyo, qof kastaa ma iibsan karo oo kaliya mashaariicda caanka ah ee qiimo jaban, laakiin sidoo kale wuxuu ku guuleystaa abaalmarin cusub oo mini-ciyaar ah. Inta lagu jiro iibka, dadka isticmaala Steam waxay heli doonaan fursad ay ku iibsadaan sicir jaban labadaba jumladaha cusub iyo kuwa ugu caansan ee sanadaha hore.
https://termotools.com so.termotools.com © Wararka 2020